रत्नेचौर–बेनी सडक कालोपत्रे – Sourya Online
रत्नेचौर–बेनी सडक कालोपत्रे
सौर्य अनलाइन २०७६ फागुन १२ गते ८:३० मा प्रकाशित
म्याग्दी । रत्नेचौर–बेनी खण्डको सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बागलुङ–बेनी सडक खण्डअन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको भुवानेदेखि खबरासम्म चार किलोटिर सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले ठेक्का लगाएको सडक स्तरवृद्धी र कालोपत्रेको काम ०७४ माघदेखि सुरु भएको थियो । कालोपत्रे गर्नुअघि सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण र ग्राभेल स्तरको काम सम्पन्न गरिएको थियो । चार किलोमिटर रत्नेचौर–बेनी खण्डको सडक कालोपत्रेको काम करिब ९३ प्रतिशत सम्पन्न र वैशाखसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्ने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले जानकारी दिए ।
१२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बढी लागतमा सो सडक कालोपत्रेको ठेक्का नागार्जुन देव एन्ड सायर बिएन जेभीले लिएको थियो । ‘कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रतिनिधी जिसीले बताए । संघीयता कार्यान्वयनपछि सडक डिभिजनले प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । गतवर्ष बजेट अभावमा अघि बढाउन नसकिएको यो सडकलाई यसवर्ष बजेट व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न गराउन लागिएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ओमराज ढुंगानाले बताए ।
‘बागलुङ हुँदै म्याग्दीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बागलुङ–बेनी सडक खण्ड अन्तर्गतको रत्नेचौर–बेनी खण्डको सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, ढुंगानाले भने । ‘चिसो बढेको कारण कालोपत्रेको काम केही समयलाई स्थगित गरिएको छ,’ उनले खबरादेखि हाँडेभिरको पुलको मुखसम्मको सडक पनि कालोपत्रेका लागि प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।
कालोपत्रेका लागि रिनेटिङ, ग्याबियन पर्खाल लगाउने, रक कटिङ गरेर सडकलाई नालीसहित १० मिटर फराकिलो पारिएको छ । ९ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्रे गरिएको छ । यसअघि बागलुङदेखि रत्नेचौरसम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । यो सडक कालोपत्रे भएमा बेनी नगरपालिका–१ र २ का बासिन्दाका साथै म्याग्दी हुँदै बागलुङ आवतजावतका लागि सहज हुने वडाध्यक्ष टेकबहादुर रावलले बताए ।
यात्रा अवधि छोटिनुका साथै सवारी भाडा र ढुवानीदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । बेनी–बागलुङ सडक मालढुंगा–बेनी सडकको विकल्पको रुपमा समेत रहेको छ । मालढुंगा बेनी सडक अवरुद्ध हुँदा बागलुङ–बेनी सडक भएर म्याग्दी र मुस्ताङ जाने आउने सवारी साधन आवतजावत गर्न सक्नेछन् । सम्झौताअनुसार फागुन महिनाभित्र सडक कालोपत्रेको काम सक्नुपर्नेछ ।
१८ हजार बढी नेपाली स्वदेश फर्किए
अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको महिलाको शव सनाखत नभएर अस्पतालमै रोकियो
त्रिशूलीमा बेपत्ता स्करपियोका धनी प्रहरी सम्पर्कमा
अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै इञ्जिनीयरविरुद्ध मुद्दा
भिक्षु डा. ज्ञानपूर्णिकको निधन
गुल्मीमा पहिरोले एकको मत्यु, एक बेपत्ता
‘वनपालेको लौरी’ मा शिवन र एलिना
पहिरोमा परेर कालीकोटमा एक महिलाको मृत्यु
प्रतिपक्षीका नाराबाजीकै बीच प्रस्ताव पारित
विद्ययालयमाका क्वारेन्टाइनको विकल्प खोज्दै प्रशासन
खोलामा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयको खुशी
बागलुङका युवकको क्वारेन्टाइनमै मृत्यु
लोप हुँदै असारे भाका गाउँदै धान रोपाइँ गर्ने बेठी परम्परा
टिपरको ठक्करबाट दुईको मृत्यु
फर्जी श्रम सम्झौताबाट युएई लगिएर बिचल्ली भएकी सन्जुको उद्धार
देश भक्ति प्रति लांक्षित गर्नु अन्याय
माधव कमरेड, आत्म मूल्यांकन गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले किन बोलाए मन्त्रीलाई बालुवाटार ?